SBS Language | Boostada Australia oo daabacday tigidho lagu xasuusanayo Lunay Year
Boostada Australia oo daabacday tigidho lagu xasuusanayo Lunay Year
Dabbaal-deggii sanadka Luna Year ee loo yaqaanno sannadkii Shabeelka ayaa la sheegay inuu doorkan lahaa xiiso dheeraad ah. Australia Post ayaa daabacday tigidho lagu xasuusan doono sannadka Shabeelka oo soo-jireen ahaan looga dabbaal dego waddammo uu ka mid yahay Shiinuhu, laakiin Australia-na hadda looga dabbaal dego.
Presented by Abdinur Ismail
Sannadka Shabeelka, loona yaqaanno Luna Year ayaa lagu xidhiidhin doonaa soo-yaalka boostada Australia, ka dib markii ay Australia Post soo daabacday tigidhada waraaqaha la diro lagu dhejiyo oo lagu soo dhoweynayey sannadka cusub ee Luna Year.
Luna Year, wuxuu sannadkan maaddiga ah ee 2022 bilaabmay 1dii Febraayo, iyada oo uu halkaa ku dhammaaday sannadkii 'The year of the Ox' oo macneheedu yahay sannadkii Dibiga.
Xayawaanka ayaa la sheegay, sida ay dadka ku dhaqmaa aamminsan yihiin, inuu sannadka ku daro rajo iyo qasdi wanaagsan.
Tigidhada oo ay ku sawiran yihiin Shabeello, ayaa waxaa hindistey sawir-naqshadeeye Sydney deggan oo la yidhaando Chrissy Lau iyadoo uga jeeddey 'shabeello nasiib leh'. Fekerkaas ayaa laga soo qaatay walxo loo ekeysiiyey bisado oo ay Shiinaha iyo Japan dhaqan ahaan u isticmaalaan.
Year of the Tiger 2022 stamps Source:Australia Post
Walxahahaas bisadaha loo ekeysiiyey oo nasiibka badan lala xidhiidhiyo, ayaa lagu arkaa dadka Asia kasoo jeeda dukaamadooda. Waana calaamad u taagan 'dhaqammo kala duwan'.
Tigidhadaas shabeelku waxay ka kooban yihiin saddex qiime oo kala duwan:
Tigidh-ka qiimihiisu yahay $1.10 waxaa ku naqshadaysan shabeel kor u haya ubax, kaasoo marka loo eego dhaqank Shiinaha u taagan rajo iyo adkeysi - sida Ms Lau laga soo xigtey.
Tigidhka labaad oo qiimihiisu yahay $2.20 waxaa ku naqshadaysan shabeelka oo kor u haya xaraf ka mid ah xarfaha luqadda Shiinaha oo loogu dhawaaqo "fu" macneheeduna yahay "nasiib'. Wuxuu kale oo hayaa Rash, kaasoo dhaqanka Shiinaha ahaan, lagu cabsiiyo Jinniyada Sharka leh - waa sida ay u dhaqmaane
Tigidhka qiimihiisu yahay $3.30 waxaa ku naqshadaysan shabeel gacan ku haya walax la yidhaahdo Chinese knot oo u taagan cimri-dherer, gacanta kalena ku haya Liin-macaan (bambeelmo) xadhig ku xidhiidhsan.
Liin-macaanta ayaa aad loo istimcaalaa inta uu socdo xuska sannadka Shiinuhu (Luna Year). "Liin-macaantu waa astaan qani-nimo" ayay tidhi Ms Lau.
Lau, waxay sheegtay in midabka 'pink' ee tigidhadhu yahay mid aan soo-jireen ahaan la isticmaalin marka loo dabbaal-degayo sannadka cusub ee Shiinaha, laakiin bay tidhi, ay maaddaama ay sannadka Lunay Year-ka iyo maalinta Valantine-ku isku dhowaayeen, ay u aragtay inay wacan tahay in ay midab pink ah isticmaasho si uu u metelo 'jacayl'.
Hadda, waa markii labaad ee Australia Post ay far-shaxankan Australian iyo Shiinehaba ah, u dirsatay inay usoo hindisto tidhigidho lagu xuso Sanadka Cusub ee Luna Year.
Ms Lau, waxay sheegtay in laga yaabo in sannadka Luna Year uu shacabka adduun-weynaha ku noqdo mid caqabaddiisa wata, sidaa awgeedna ay rabtey inay tigidhada ku muujiso dareen ah 'isku-keenid'
Waxay tidhi: "Labo sannadood oo adag oo aan weli dhammaadkoodii loo jeedin ayaa soo maray qof kasta, markaa tigidhadani waa kuwo casri ah, qurux-badan, mada-daalona leh, qof kastana xasuusiya inuu had iyo jeer dhoollo-caddeyn ku muujiyo farxad"
6-dii Jannaayo ee sannadkan 2022 ayay soo bexeen tigidhadani.